बलिउडमा डेब्यू गर्दै डेनीका छोरा, भिलेनकी हिरो ? - Prawas Khabar
बलिउडमा डेब्यू गर्दै डेनीका छोरा, भिलेनकी हिरो ?
एजेन्सी । बलिउडमा भिलेनबाट पहिचान बनाएका डेनी डेंजांपाका छारा रिंजिंग पनि अब छिटै बलिउडमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी बाबु जस्तै भिलेन भने होइन हिरोबाट बी टाउनमा प्रवेश गर्न लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उनी एक्शन थ्रीलर फिल्मबाट बलिउडमा आउन लागेको बताइएको छ । सो फिल्मको नाम स्काड हुने बताइएको छ भने रिजिंगले फिल्ममा एक्शन गर्नेछन् । टाइगर श्राफ र सलमान खानसँग निकै नजिक मानिएका रिजिंगको बडी टाइगरको भन्दा गज्जबको रहेको बताइन्छ ।
रिजिंग बलिउडमा आउने भएपछि टाइगरकी गर्लफ्रेण्ड दिशमाले बधाई दिएको जनाइएको छ ।
रिंजिंगको सो फिल्मको शूटिंग आगामी वर्षबाट शुरु हुनेसमेत जनाइएको छ । फिल्ममा उनलाई जबरजस्त एक्शन गरेको देख्न सकिनेछ । फिल्मका लागि रिंजिंगले अहिल्यै तयारी शुरु गरेकोसमेत बताइएको छ । उनी टाइगरसँगै जीम जानेगरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
छोराको बलिउड डेब्यूबारे बोल्दै डेनीले छोराको बलिउड प्रवेशका लागि आफूले कुनै सहयोग नगरेको बताए । उनले फिल्म ठूलो क्षेत्र भएको भन्दै कलाकार त्यसको एक भागमात्र भएको बताए । उनले छोराले बलिउडमा स्थान बनाउनेमा आफू विस्वस्थ रहेको बताए ।
बनभोज को सम्झना तिको
सनसनीपूर्ण आरोपका विरुद्ध तनुश्रीलाई लाग्यो झड्का !
काठमाडाैं/ ‘मैले सानै उमेरदेखि मेकअप गरिनँ ।’ जब म पहिलोपटक रातो लिपस्टिक लगाएर कार्यालय गएँ,
बहाना बन भोज को सम्झना तिज को
मनिषा कोइरालाको आत्मवृतान्त आउँदै, खुल्ने छन् यस्ता रहस्य